Wasaaradda Boostada oo shir caalami ah uga qeybgaleysa Tunis+Sawirro – Radio Muqdisho
Wasaaradda Boostada oo shir caalami ah uga qeybgaleysa Tunis+Sawirro
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qaybgaleysa shirweyne ka bilawdey maalinkii shalay ahayd 24/10/2016 oo socon doona illaa 3-da bisha Nov. Shirkan oo ah mid ay qabato hay’adda Isgaarsiinta Caalamka ee ITU ka socda magaalada Hammamet ee dalka Tunisa waxaana ka qaybgalaya dhamaan dawladaha caalamka wasaaradahooda Isgaarsiinta iyo shirkadaha Isgaarsiinta ee caalamka. Shirkan ayaa loogu magacdaray World Telecommunicion Standersization Assembly WTSA2016.
Mudane Axmed Xaaji Cabdi oo ka qaybgalaya shirkan ayaa Radio Muqdisho u sheegey in shirkani yahay mid muhiim u ah dawladaha caalamka uuna ku faraxsan yahay in dawladda Soomaaliyeed ay si buuxda uga qaybqaadaneyso shirkan iyadoo wasaraddu ay sidoo kale sanadkan dhexdiisa ka qaybgashay laba shir oo kale oo caalami ah oo ka kala dhacay Ethiopia iyo Kenya kaasoo looga hadlayay hormarinta Isgaarsiinta caalamka.
Maxamed Anwar Macruuf wasiirka Isgarsiinta iyo Dhaqaalaha ee dalka Tunisia oo furey shirka ayaa u mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha shirka oo gaarayay Kun ruux iyo boqol dawladood oo ay Soomaaliya kamid tahay.
Raisul Wasaraha dalka Tunisia Mudane Yusuf Shaahid ayaa sidoo kale xafladda ka hadley isagoo uga mahadceliyey in hay’adda ITU ay dooratay in shirkeeda ku qabsato dalka Tunisia waxuuna si qalbi ah usoo dhaweeyey dhamaan kasoo qaybgalayaasha shirkan waxuuna u rajeeyey hormar iyo guul muddada uu socdo shirkan.
Shirkan oo looga hadlayo guud ahaan hormarinta Isgaarsiinta ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa hormarinta Isgaarsiinta casriga ah ee jiilka Shanaad (5G) waxaana muhiim ah in dawladda Soomaaliyeed ay qaadato doorkeeda ayna caalamka dib ula qabsato.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ayaa kulamo gaar gaar ah la leh madaxda ITU iyo wasaaradaha Isgaarsiinta madaxdooda shirka kasoo qaybgalaya. Sidoo kale waxaa jiri doona shir khaas ah oo dhexmari doona madaxda ITU iyo Agaasimaha Guud oo looga hadli doono Isgaarsiinta Soomaaliya iyo hormarintooda.
Akadeemiyo Goboleedka Af-soomaaliga oo kulan aqoon isweydaarsi ah ku qabatay Beydhabo (SAWIRRO)